Imidiya yokuncokola ukuze kulungelwe uLuntu | Martech Zone
Lwesine, Okthobha 24, 2013 Douglas Karr
Iipesenti ezingama-83 zabantu baseMelika bafuna iimveliso ukuxhasa izizathu kunye Iipesenti ezi-41 zabantu bathenga imveliso kwinkampani kuba bayazi ukuba inkampani iyiyo enxulumene nonobangela. Njengoko iinkampani ezininzi kunye nokungenzi nzuzo kuguquka kumashishini ezentlalo (i-hybrid yesisa kunye neshishini), uninzi lubala kumajelo asekuhlaleni ukubanceda baphumelele.
Sabelane ngobungqina obumnandi obukhulu unobangela wentengiso. Mna Ndiyathemba ukuba licandelo eliya kuqhuma ngokuthandwa-ngakumbi xa ucinga imiceli-mngeni yezoqoqosho elijongene nayo ilizwe lethu ngoku.
Oku kulandelayo kulandelayo kugxininisa ezimbalwa kule mizekelo, kwaye kubonelela ngakumbi ngenkxaso yeenkampani ezijonga ukuya kwimodeli yeshishini 'lentlalontle'.
tags: unobangela wentengisosaimali engenzi nzuzoentlalontleImidiya yokuncokola